अधिकार र स्वतन्त्रता छ भन्दैमा कसैकाे अपमान गर्नु त भएन (चिन नेपाल मीडीया विवाद) – मार्केटिंग कल्चर
Posted on February 20, 2020 by मार्केटिङ्ग कल्चर
हामिसँग धेरै अधिकार हरु छन, अब स्वतन्त्रताकाे अधिकार त्यसमा एक भयाे, त्यसतै प्रेस स्वतन्त्रताकाे अधिकार अर्काे, अन्यपनि धेरै छ तर सबैकाे यहाँ उल्था र उल्लेख नगराै ।
मैले याे किन खाेजेकाे हाे भन्दा यदि हामीले हामी सँग अधिकार छ भन्दैमा जेपायाे त्यही बाेल्दै जाने हाे र लेख्दै जाने हाे भने त्याे उचित हुँदैन जस्ताे लाग्छ ।
अब यस्ताे हुन नदिन के यस्ताे नियमहरु बनाउनु भएन कि बनाए पछि जसले यसकाे पालना गर्ने हाे आफ्नाेमात्रै स्वार्थ हेर्नु भएन ।
पछिल्लाे समयमा काठमाडाैँ पाेस्टले लेखेकाे एउटा लेखमा चिन ध्यान आर्कषण भएकाे छ । त्याे हुनु पनि स्वभावीक हाे किन भने यस्ताे आपतकालीन अवस्थामा सरकार तथा मीडीयाले सान्तव्ना दिनुकाे साँटाे उल्टै अन्यथा प्रश्न उठाएकाे छ र जस्लाइ चिनले अपमान गरेकाे भनेर भनेकाे छ ।
उहाँहरकाे भनाइ पनि जायज हाेऽ पत्रकारहरुले छापेकाे लेख पनि जायज हाेला तर के याे समयानुकुल छ । यदि आपत बिपतकाे बेला यस्ता काम गरेर नितिगत क्षेत्रमै प्रश्न उठाउने काम गर्नु हुन्छ भने त्याे राम्राे हाे?
त्यसैमाथि नेपालका पत्रकारहरुले चिनले पत्रकारमाथि लान्छना लगाउने हिसाबले वक्तव्य दिएकाे भन्दै बिराेध गरेका छन ।
याे तस्वीर काठमाडाैँ पाेस्ट बाट साभार गरिएकाे छ
खासमा याे विवाद किन भएकाे हाे?
विवाद चर्किनुकाे कारण याे तल लेखिएकाे एउटा लेख हाे जस्मा उल्लेख छ चिनकाे राजनैतिक पक्षले क्राेनाभाइरस सँग लड्न अझै बढी काम गर्नु पर्ने जस्ताे देखिन्छ । त्याे ठिक छ तर त्यसकै दाँया तिर एउटा फाेटाे राखिएकाे मावाे काे तस्विर ले हाे ।
अब यसमा तपाइहरुले के भन्नु हुन्छऽ प्रतिकृया दिनु हाेला ।
शाैचालयमा अब चुकुल हैन धागाे बाँध्नुस सजिलाे हुन्छ ।